Inter Milan oo doonaysa inay baabi’iso shuruudda ku xiran heshiiska Icardi (Shuruudo lagala hor yimid) – Gool FM
Inter Milan oo doonaysa inay baabi’iso shuruudda ku xiran heshiiska Icardi (Shuruudo lagala hor yimid)
Raage February 14, 2018
(Milano) 14 Feb 2018 – Inter Milan ayaa raadinaysa qorshe ay ku baabi’inayso shuruudda ku xiran qandaraaska Mauro Icardi, balse si ay taasi u dhacdo waa inay aad u kordhiyaan gunnadiisa iyo mushaarkiisa.
Qannaaska ayaa haatan heshiiskiisa lagu fasiqi karaa €90m oo euro, kaasoo jiraya tan iuo bisha Luulyo, waxaana jira cabsi ku wajahan inay Real Madrid ama xitaa kooxdii kale ee xoolo haysataa ay heshiiskaa fasiqi karto.
Si aysan taasi u dhicin, Nerazzurri ayaa doonaysa inay bedesho tibxaha heshiiska, iyadoo uu wargayska Corriere dello Sport soo gudbiyay qaar ka mid ah tafaasiisha qorshaha Inter.
Waxay ku yaboohayaan inay bixiyaan mushaharka Icardi oo ay ku darayaan ilaa €2m, isagoo haatan qaata €4.7m balse laga dhigayo €6.5m, kaasoo lagu darayo bareemiyooyin gaar ah.
Taa beddelkeeda, waxay Beneamata doonaysaa in heshiiska laga tirtiro shuruudda lagu fasiqi karo, yeelkeede, xaaskiisa Wanda oo wakiil ka ah ayaa dalbanaysa inaan sidaa la yeelin, balse laacibka mushaarkiisa iyo shuruuddaba la kordhiyo iyadoo mushaarka laga dhigayo €7m, shuruudana €150-200m.
Haddiise ay Inter ku adkaysato in gebi ahaanba shuruudda meesha laga saaro waxay ku khasban tahay inay mushaarka Icardi ka dhigto €8m sanadkii.
Gennaro Gattuso oo qorshe cajiib ah u degaya ciyaarta habeen dambe!
Manchester City oo jabisay rikoorkii Champions League-ga ee Liverpool - Waa kee?